You're Not Righteous Enough — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
"ဒီ! သငျသညျပွောဆို, 'ငါလုံလောက်တဲ့နောင်တရကြပါဘူး။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါလုံလောက်တဲ့ယုံကြည်ကြပါဘူး။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါအရမ်းမထိုက်တန်ဖြစ်၏။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါရှာဖွေတွေ့ရှိမနိုင်,'' နောက်ထပ်ပြောပါတယ်, 'ငါမဆိုဖြောင့်မတ်သော။ ' 'ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ဖြောင့်မတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းပြောအတော်လေးမှန်သည်; ဒါပေမယ့်မည်သည့်အဘို့အကြည့်ဖို့အတော်လေးမှားယွင်းနေသည်. ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်, ‘Look unto me.’ God will have you turn your eye off yourself and look unto him.”
ဖြောင့်မတ်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုရန်လာနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရာကိုမဖြစ်; ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ခရစ်တော်ထံသို့လာသောအခါကြှနျုပျတို့ရယျ. လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်, ယရှေုသညျကြှနျုပျတို့အနေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့အပြစ်ရှိသောအသက်တာသည်အထိုက်သောပြစ်ဒဏ်ယူ. အကြှနျုပျတို့ကိုယ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ကြသောအခါ, ယရှေုနေထိုင်ခဲ့စုံလင်သောအသက်အဘို့အအကျိုးကိုခံရ. ကအံ့သြဖွယ်မဖြစ်?
ဒါဟာကျနော်တို့လုံလောက်တဲ့ဖြောင့်မတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတကယ်မှန်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအဖြောင့်မတ်ကိုယ်တော်၌တွေ့သည်. အဘယ်သူမျှမ, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့ခွင့်လွှတ်ကိုယ်တော်၌တွေ့သည်. ကျနော်တို့ကျော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုစတင်မနိုင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့အသက်တာသစ်ကိုယ်တော်၌တွေ့သည်. ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှခရစ်တော်၌တွေ့သည်! ဒါကြောင့်သင်အဘို့အဘယ်သို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? ယခုကိုယ်တော်ကိုမျှော်ကြည့်.
ဒါဝိဒ်သည် • စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 3:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
VictorWayneHallJr • စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 5:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
tshego • စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 6:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တကယ်မှန်ပါတယ်!! This is something I needed to hear!! Gotta look to God! ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ် Lee က
Regin • စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 7:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Such an encouraging word. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါတကယ်ကဒီလိုအပျ. Keep up the great work Trip!
ဖေါ်ပြ: နံနက် Mashup 9/13 | ဓမ္မ Matters
Rupert_lange • စက်တင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 7:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါကပိုသဘောတူနိုင်ဘူး. This isaproblem people have when they first get to know Christ, but I tell them of the perfect example for this: ပေါလုက. A man who was doing one of the worst things on this earth, and he turned into one of the greatest disciples ever. This should show you how powerful God is, and that you don’t need to be perfect to beaChrsitian.
Asong • စက်တင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 4:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kassy • စက်တင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 7:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
AHL • စက်တင်ဘာလ 15, 2013 တွင် 5:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ELIAS • စက်တင်ဘာလ 19, 2013 တွင် 8:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I praise the Lord for this website .Its so sound in doctrine,ကြေးဇူး,love and speech. Keep Braggin on Jesus .. I loved your message from 1John Saturday morn at the UAC13 .. Keep the solid resources coming brother
lerato • စက်တင်ဘာလ 30, 2013 တွင် 6:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစဉ် • ဒီဇင်ဘာလ 20, 2018 တွင် 8:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်